စကားလုံးတွေ ထပ်မနေအောင် ရှောင်ရှားခြင်း (How to avoid repetition) - Myanmar Network
Posted by Win Mya Swe on October 8, 2012 at 11:31 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
စာရေးရာမှာဖြစ်စေ၊ စကားပြောမှာဖြစ်စေ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် သုံးပြီးသား စကားလုံး ဒါမှမဟုတ် စကားစုကို ထပ်မသုံးဘဲ ရှောင်ရှားရပါတယ်။ ရှောင်ရှားနည်း တစ်နည်းကတော့ it, that, one, do, there နဲ့ so လိုမျိုး အထွေထွေသုံး အစားထိုး စကားလုံးတွေကို သုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
She folded the paper and put it in the envelope. စာရွက်ကို ခေါက်ပြီး စာအိတ်ထဲ ထည့်လိုက်တယ်။ (She folded the paper and put the paper in the envelope. စာရွက်ကို ခေါက်ပြီး အဲဒီစာရွက်ကို စာအိတ်ထဲထည့်လိုက်တယ် လို့ ပြောတာထက် ပိုပြီး သဘာဝကျပါတယ်။)
‘Do you think that he will come?’ ‘I think so.’ "သူလာမယ်ထင်သလား။" "ထင်ပါတယ်။" (= I think that he will come. သူလာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်နဲ့ အတူတူပါဘဲ။)
‘How aboutadrink?’ ‘I would like that.’ "တစ်ခုခုသောက်မလား။" "ကောင်းသားဘဲ" (= I would likeadrink. တစ်ခုခု သောက်ချင်ပါတယ် နဲ့ အတူတူဘဲ။)
‘What sort of house are you looking for?’ ‘One withabig garden.’ "ဘယ်လိုအိမ်မျိုး ရှာနေတာလဲ။" "ပန်းခြံကြီးကြီးနဲ့ အိမ်ပါ။"
‘Let’s meet at the club.’ ‘OK see you there.’ "ကလပ်မှာ တွေ့ကြစို့။" "အိုကေ အဲဒီမှာ တွေ့မယ်။" (= See you at the club. ကလပ်မှာတွေ့မယ်။)
အသုံးအများဆုံး အစားထိုး စကားလုံးတွေကတော့ နာမ်စား Pronoun တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နာမ်အတွက် ဒါမှမဟုတ် နာမ်ပုဒ်အတွက် အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ နာမ်စားထဲမှာ လူပုဂ္ဂိုလ်ကို ပြတဲ့ နာမ်စား personal pronoun တွေ (ဥပမာ he, she, they)၊ မိမိကိုယ်ကို ပြုလုပ်မှုပြ နာမ်စား reflexive pronoun တွေ (ဥပမာ himself, herself, itself)၊ ပိုင်ဆိုင်မှုပြ နာမ်စား possessive pronoun တွေ (ဥပမာ my, his, her)၊ ၀ါကျကဏ္ဍဆက် နာမ်စား relative pronoun တွေ (ဥပမာ who, that, which)၊ ညွှန်ပြဝေါဟာရ demonstrative တွေ (ဥပမာ this, that, these, those)၊ အမေးပြဝေါဟာရ interrogative တွေ (ဥပမာ what, who)၊ ယေဘုယျနာမ်စား indefinite pronoun တွေ (ဥပမာ somebody, anybody) ပါဝင်တယ်။
Jane was happy because she had wonaprize. ဆုရလို့ ဂျိန်း ပျော်နေတယ်။
(Jane was happy because Jane had wonaprize. ဂျိန်းဆုရလို့ ဂျိန်းပျော်နေတယ်လို့ မပြောရဘူး။)
The old woman talks to herself all the time.အဖွားကြီးက သူ့ဖာသာ တစ်ယောက်တည်း တစ်ချိန်လုံး စကားပြောနေတယ်။
(The old woman talks to the old woman all the time. အဖွားကြီးက အဖွားကြီးကို တစ်ချိန်လုံး စကားပြောနေတယ် လို့ မပြောရဘူး။)
Have you ever met the people who live next door? ဘေးအိမ်က လူတွေနဲ့ ဆုံပြီးပြီလား။
I would like something to eat. တစ်ခုခုစားချင်တယ်။
ကြိယာ နဲ့ ကြိယာနောက်က ပါလာတဲ့ စကားလုံးတွေ တစ်တွဲလုံးအတွက် အစားထိုးအနေနဲ့ do so နဲ့ do it / that ကို သုံးနိုင်တယ်။
‘Can you repair my computer?’ ‘I will do it at once.’ "ကွန်ပျူတာ ပြင်ပေးနိုင်မလား။" "အခုချက်ချင်း လုပ်လိုက်ပါ့မယ်" (= I will repair your computer at once. အခုချက်ချင်း ကွန်ပျူတာ ပြင်လိုက်ပါ့မယ် နဲ့ အတူတူဘဲ)
I asked him to help me but he wasn’t willing to do so. သူ့ဆီက အကူအညီတောင်းခဲ့ပေမယ့် သူက မပေးချင်ခဲ့ဘူး။
Permalink Reply by thaw thaw on October 8, 2012 at 12:49
Permalink Reply by Ma zin lay nwe on October 8, 2012 at 13:15
Permalink Reply by Su Nanda Kyi on October 8, 2012 at 13:23
Permalink Reply by thant zin tun on October 8, 2012 at 14:20
Permalink Reply by Tin Moe Hlaing on October 8, 2012 at 15:28
Permalink Reply by Cao Xue Ai on October 8, 2012 at 16:14
Permalink Reply by Tina on October 8, 2012 at 16:23
Permalink Reply by Khin Mar Tun on October 8, 2012 at 18:37
Permalink Reply by Min Naing Thant on October 9, 2012 at 13:39
Thankalot to you
Permalink Reply by mgkothu on October 9, 2012 at 21:32
Permalink Reply by Sithu Htet on October 10, 2012 at 17:23
:-) Good article!Very informative!
Permalink Reply by War Lay on October 11, 2012 at 14:54
so thanks for me .....